အဆိုပါအာရိယန်ညီနောင်များ - Barry Mills က & Tyler Davis က
ဆုံး Notorious ထောင်မှဂိုဏ်းတစ်ခုမှာ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို
(ကိုလည်း AB ဒါမှမဟုတ်အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ်လူသိများ) ကိုအာရိယန်ညီနောင်များမှာ 1960 ခုနှစ်တွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့အဖြူရောင်သာအကျဉ်းထောင်ဂိုဏ်းတစ်ခုဖြစ်သည် စန်း Quentin ပြည်နယ်ထောင်မှ ။ အဲဒီအခြိနျမှာဂိုဏ်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုယ်ထိလက်ရောက်အနက်ရောင်နှင့်ဟစ်စပန်းနစ်အကျဉ်းသားများကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခံရခြင်းမှအဖြူအကျဉ်းသားကာကွယ်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်။
ယနေ့ AB ပိုက်ဆံအတွက်သတင်းများအရပိုပြီးစိတ်ဝင်စားမှုသည်နှင့်တစ်ဦးလူသတ်မှု, မူးယစ်ဆေးဝါးကုန်ကူးခြင်း, ငွေညှစ်ခြင်း, လောင်းကစားများနှင့်လုယက်မှုအတွက်၎င်း၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုများအတွက်လူသိများသည်။
စန်း Quentin ပြည်နယ်အကျဉ်းထောင်မှာ 1950 ကာလအတွင်းခိုင်မာတဲ့အိုငျးရစျအမြစ်များနှင့်အတူတစ်ဖောက်ပြန်သောသူငယ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဂိုဏ်းပုစိန်သှားဂန်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ အဆိုပါဂိုဏ်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်အကျဉ်းထောင်အတွင်းရှိအခြားလူမျိုးရေးအုပ်စုများထံမှစော်ကားခံရခြင်းမှအဖြူအကျဉ်းသားကာကွယ်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်။ အဆိုပါဂိုဏ်းအများအပြားကသူတို့သွားများအတွက် embedded ဖန်၏သေးငယ်သောအပိုင်းပိုင်းရှိခဲ့ကြောင့်အမည်, စိန်သှားရှေးခယျြခဲ့သညျ။
အစောပိုင်း 1960 ခုနှစ်မှာပိုမိုထိန်းချုပ်လိုသော, ထိုဂိုဏ်းသည်၎င်း၏စုဆောင်းရေးအားထုတ်မှုတိုးချဲ့နှင့်ပိုပြီး supremacist-အဖြူနှင့်အကွမျးဖကျကျရောက်နေတဲ့အကျဉ်းသားဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဂိုဏ်းကြီးပြင်းအဖြစ်, သူတို့ကအပြာရောင်ငှက်မှစိန်သှားထံမှအမည်အားပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကွယ်လွန်သူ 1960 by လူမျိုးရေးမငြိမ်မသက် ထိုလူမြိုးတလျှောက်လုံးတိုးမြှင့နှင့်အကျဉ်းထောင်များအတွင်း desegregation ရာအရပျကို ယူ. အားကောင်းလူမျိုးရေးတင်းမာမှုများထောင်ထဲမှာကိုက်အတွင်းကြီးပွားသတည်း။
အဆိုပါ Black ကပြောက်ကျားမိသားစု, အနက်ရောင်သာအဖွဲ့ဝင်တက်လုပ်နေတဲ့ဂိုဏ်း, အပြာ Birds ဂိမ်းတစ်ခုအစစ်အမှန်ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်အဖွဲ့အာရိယန်ညီနောင်များအဖြစ်လူသိများဖြစ်လာခဲ့သည်သည့်မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းရန်အခြားအကျဉ်းထောင်အဖြူသာဂိုဏ်းဆီသို့ကြည့်ရှုကြ၏။
တစ်ဦးက "သွေးထဲမှာ-သွေးထဲကကို" အတွေးအခေါ်ကိုကိုင် ယူ. AB ထောင်ထဲမှာအတွင်းခြိမ်းခြောက်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုစစ်ဟုန်းဟုန်းမြည်ကြ၏။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အကျဉ်းသားများထံမှလေးစားမှုတောင်းဆိုကြောင့်ရဖို့ကိုသတ်လိမ့်မယ်။
Power က Driven
1980 စဉ်အတွင်းထိန်းချုပ်မှုနဂိုအတိုင်းနှင့်တကွ, AB ၏ရည်ရွယ်ချက်လူဖြူများအတွက်မျှသာအကာအကွယ်အကွယ်အကာဖြစ်ခြင်းကနေအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားလေသည်။
ဂိုဏ်းအဖွဲ့ဝင်ကြီးပြင်းခြင်းနှင့်အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ထောင်ထဲကထွက်ပါစေနှင့် re-ထဲသို့ဝင်သည်အခြားအကျဉ်းထောင်ခဲ့ကြ, ကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု system ကိုလိုအပ်ခဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်။ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ငွေညှစ်, မူးယစ်ဆေးဝါး, လက်နက်နှင့်လူသတ်မှု-for-အမြတ်ရခြင်းအအစီအစဉ်များကိုချွတ်ပေးဆောင်ခဲ့ကြနှင့်ဂိုဏ်းတိုင်းပြည်အနှံ့ကအခြားအကျဉ်းထောင်မှ၎င်း၏အာဏာကိုချဲ့ထွင်ချင်တယ်။
ဖက်ဒရယ်အကျဉ်းထောင်အတွင်းရှိဂိုဏ်းလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ပြည်နယ်အကျဉ်းထောင်ကျော်ထိန်းချုပ်မှုထားရှိမည်ဖြစ်သောကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အဖွဲ့ခွဲထိန်းချုပ်မယ်လို့သူဖက်ဒရယ်အဖွဲ့ခွဲ - တစ်တင်းကျပ်သောအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ခြင်းအတွက် AB ၏အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုအုပ်စုရှိသည်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Shamrock Clover ရွက်။
"AB ။ " Initials
အဆိုပါနံပါတ်များကို " 666. "
အဘို့အနာရီ "Heil ဟစ်တလာ။ "
အဓိပ္ပာယ်ဒုစရိုက် Fein, အိုငျးရစျရီပတ်ဘလီကန်တပ်မတော်နိုင်ငံရေးတောင်ပံပုံနဲ့တူတဲ့တစ်ဦးကစွန်ငှက်, "ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်။ "
ဆက်သွယ်ရေး coding တစ်ခုနည်းလမ်းအဖြစ် Gaelic (ဟောင်းအိုငျးရစျ) သင်္ကေတကိုအသုံးပြုရန်လူသိများ။
ရန်သူများ / ပြိုင်ဘက်
အဆိုပါအာရိယန်ညီနောင်များအစဉ်အလာအနက်ရောင်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်ထိုကဲ့သို့သော Black ကပြောက်ကျားမိသားစု (နယ်ခြားစောင့်တပ်), Crips, သွေးနှင့်အယ်လ် Rukns အဖြစ်အနက်ရောင်ဂိုဏ်း၏အဖွဲ့ဝင်ဆီသို့နက်မုန်းတီးမှုသရုပ်ပြခဲ့သည်။
သူတို့ကအစအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မက္ကဆီကန်မာဖီးယားနှင့်အတူ၎င်းတို့၏မဟာမိတ်များ၏, La Nuestra Familia (အဲန်အက်ဖ်) နဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်ကြသည်။
မက္ကဆီကန်မာဖီးယား (EME) နဲ့တစ်ဦးအလုပ်လုပ်နေကြားဆက်ဆံရေးထိန်းသိမ်းထားသည်။
အဆိုပါ AB အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အများအပြားမော်တော်ဆိုင်ကယ်ဂိုဏ်းကနေလာအရှိဆုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်ဂိုဏ်းနှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့။
အများဆုံးအဖြူရောင်အာဏာအဖွဲ့များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။ ဤသည်ကိုမကြာခဏသူတို့ရဲ့တက်တူးသို့မဟုတ်သင်္ကေတအားဖြင့်မှတ်ပုံတင်ရာတွင်အထူးသဖြင့်လာသောအခါအခြားသောအဖြူ supremacist အုပ်စုများထံမှ AB အဖွဲ့ဝင်များကကွဲပြားခြားနားသွားအတွက်ရှုပ်ထွေးမှုများစေပါတယ်။
"copycat" အာရိယန်ညီနောင်များအုပ်စုများယေဘုယျအားဖြင့်စစ်မှန်တဲ့အဖွဲ့ဝင်များကသည်းခံကြပါတယ်။ သို့သော်ဖက်ဒရယ်နှင့်ကယ်လီဖိုးနီးယား ABS သူတို့ကိုတရားဝင်ဖြစ်ဖို့စဉ်းစားပါမ AB တက်တူးကိုမီးရှို့သို့မဟုတ်မပယ်မဖြတ်လျှင်အကြမ်းဖက်မှုများခြိမ်းခြောက်လိမ့်မည်။
တက်ကြွစွာ Dirty အဖြူရောင် Boys, ထိုတက္ကဆက် Syndicate အနေနဲ့ Anglo-လှည့်ဖျား-ချွတ်ဂိုဏ်းနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည်။ အလားတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာအသံတိတ်ညီနောင်များနှင့်အတူလေ့လာတွေ့ရှိထားသည်။
AB ဂိုဏ်းလှုပ်ရှားမှုတက်ကိုချိုးဖျက်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်, ထောင်ထဲမှာအရာရှိများကထိုကဲ့သို့ဝံပိုငှက်ပင်လယ်အော်အဖြစ် Ultra-အများဆုံးလုံခြုံရေးအကျဉ်းထောင်အတွင်းရှိထိပ် AB ခေါင်းဆောင်များအများအပြားထားရှိသော်လည်း, ဆက်သွယ်ရေးကုန်းချောတတ်ခြင်းနှင့်ပြိုင်ဘက်ဂိုဏ်းအဖွဲ့ဝင်များကသတ်ပစ်ရန်အမိန့်အပါအဝင်ဆက်ပြောသည်။
အဟောင်းတွေအဖွဲ့ဝင်များရှည်လျားသောလက်ဘာသာစကားအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် codes တွေကိုသုံးပြီးနှင့်စာအရေးအသားအတွက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန် 400 နှစ်အရွယ် binary အက္ခရာစနစ်ဖြင့်ဆက်သွယ်စုံလင်ခဲ့သည်။ ယခုလိုမှတ်စုအကျဉ်းထောင်တလျှောက်လုံးဖုံးကွယ်မည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ AB Up ကို Busting
သြဂုတ်လ 2002 ခုနှစ်, အရက်, ဆေးရွက်ကြီးနှင့်အသေနတ်၏ဖက်ဒရယ်ဗျူရို (ATF) ကတစ်ဦးခြောက်နှစ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပြီးအားလုံးနီးပါးသံသယ AB ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်များစွဲချက်တင်ခံခဲ့ရခြင်းနှင့်လူသတ်မှု, စာချုပ်တာမျိုး, လူသတ်မှုကျူးလွန်ရန်ပူးပေါင်းကြံစည်မှု, ငွေညှစ်, လုယက်မှုများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးကုန်ကူးမှုဖြင့်တရားစွဲခံရ ။
နောက်ဆုံးတွင်ထိပ် AB ခေါင်းဆောင်များ၏လေးအပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းနှင့်ရိုး၏ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိဘဲဘဝကိုစာကြောင်းများပေးထားခဲ့သည်။
barry "ဒီ Barron" Mills က - ဖက်ဒရယ်ထောင်ထဲမှာ system ထဲမှာအာရိယန်ညီနောင်များရဲ့စစ်ဆင်ရေး၏စွပ်စွဲခေါင်းဆောင်။
Tyler Davis က "ဒီရှိသွားပြီ" Bingham - ထို AB ၏ဖက်ဒရယ်ထောင်ထဲမှာနျဌာနခှဲအတွက် Mills ကအတူအလုပ်လုပ်ခဲ့သူကိုစွပ်စွဲခေါင်းဆောင်။
Edgar "ဒီခရု" Hevle: ထောင်ထဲမှာဂိုဏ်း၏ဖက်ဒရယ်နျဌာနခှဲကြီးကြပ်သောသုံးလူကိုကော်မရှင်၏စွပ်စွဲဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်သူထိပ်တန်းအဆင့်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး။
ခရစ္စတိုဖာ Overton Gibson: စွပ်စွဲခံရခြင်း, ဂိုဏ်းရဲ့နေ့-to-နေ့ကလှုပ်ရှားမှုများတာဝန်ခံအဖွဲ့ကိုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး။
အခြို့ AB ရဲ့ထိပ်ခေါင်းဆောင်များဖယ်ရှားတစ်ခုလုံးအဖြစ်ဂိုဏ်း၏နိဂုံးကိုဖြစ်ပေါ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခံစားခဲ့ရပေမယ့်, များစွာသောသူကလျင်မြန်စွာပုံမှန်အတိုင်းဆက်လက်ကတခြားဂိုဏ်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတို့ကဖြည့်လစ်လပ်ရာထူးနှင့်အတူတစ်ဦးမျှသာဆုတ်ယုတ်မှုခဲ့ယုံကြည်သည်။
ချားလ်စ် Manson ခေါင်းဆောင်များမကြိုက်ဘူးဆိုတာကို, လူသတ်မှုသူ့ type ကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင့် AB ဂိုဏ်းသို့အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ငြင်းပယ်ခံခဲ့ရသည်။ သို့သော်သူတို့ကမူးယစ်ဆေးဝါးအတွက်မှောင်ခိုတစ်ဦးနည်းလမ်းများအဖြစ် Manson သွားရောက်လည်ပတ်မိန်းမများအသုံးချကိုပြု၏။
သူကတစ်ဦးအကျဉ်းသားများကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခံခဲ့ရပြီးနောက်အာရိယန်ညီနောင်များသည်သူ၏ထောင်ချခြင်းစဉ်အတွင်း mobster သူဌေးကယောဟနျသ Gotti ကာကွယ်ပေးရန်ငှားရမ်းထားခဲ့သည်။ ဒီအကြားဆက်ဆံရေးအများအပြား "လူသတ်မှု-by-ရခြင်း" ဟုအဆိုပါ AB နှင့်မာဖီးယားကြား၌ဖြစ်ပေါ်။
ရင်းမြစ်: မှန်ကန်သော၏ဖလော်ရီဒါ Dept.
အစဉ်အဆက်တို့သည် Dumbest ရာဇဝတ်သားများ 10
Grammar အတွက် partition
အဆိုပါ FAFSA ကဘာလဲ?
ရုရှားတော်လှန်ရေး Timeline ကို: 1905
ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း: သူတို့ကသူတို့ကဖွဲ့စည်းဘယ်လို, ဘာတွေလဲ, သူတို့ကအသက်ရှင်လွတ်မြောက်ဘယ်လို
Triceratops အကြောင်း 10 အချက်အလက်
ဟားဗတ်နှင့် NYU အပြင် Big စီးတီးကောလိပ်နှင့်တက္ကသိုလ်များ
မက္ကဆီကန်လူကြိုက်များသောတေးဂီတ - တိုင်ဂျန်နို, Norteno, Banda-
သင်သိသင့်သ 10 ဟူစတန် Rapper
မက္ကစီကိုရဲ့ 31 ပြည်နယ်နှင့်တစ်ခုမှာဖက်ဒရယ်ခရိုင်
တောင်ပေါ်က Holyoke ကောလိပ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ